Maxay tahay sirta ka dambaysa dagaalka Tukaraq? | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maxay tahay sirta ka dambaysa dagaalka Tukaraq?
Maxay tahay sirta ka dambaysa dagaalka Tukaraq?
(Stockholm) 29 Maajo 2018 – Wargeyska Aftonbladet ee ka soo baxa dalka Sweden ayaa horey uga hadlay dagaalka u dhexeeya maamulada Somaliland iyo Puntland waxa uu lugta ku hayo….
Previous articleAbramovich oo arrrin la yaab leh darteed u qaatay baasaboorka Israel
Next articleYAA BADIYAY YAASE BASAY? Natiijada ugu dambaysa ee dagaalka Tukaraq oo la saadaaliyay!